रुकुमका खेम बहादुर घर्तीलाई श्री ५ महाराजाधिराज बन्ने रहर चलेपछि नारायणहिटी दरवार गए, श्रीपेच लगाउन र आफूलाई राजा घोषणा गर्न भने पाएनन्, यस्तो छ कारण « Gaunbeshi
काठमान्डौ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा अवलोकनका लागि राखिएको पूर्वराजाको श्रीपेच झिक्न खोज्ने गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा प्रदर्शनमा राखिएको श्रीपेच झिक्न खोज्ने व्यक्ति पक्राउ परेका हुन् ।
शुक्रबार दरबार संग्रहालयको अवलोकनका क्रममा रुकुम मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थायी घर भई हाल काठमाडौंको म्हेपीमा बस्दै आएका अन्दाजी २५ वर्षीय खिमबहादुर घर्तीले सोकेस फु’टा’एर श्रीपेच झिक्न खोजेका थिए । तर, सोही क्रममा सुरक्षामा खटिएका सेनाले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीको जिम्मा लगाएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालय व्यवस्थापन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिए ।
‘श्रीपेच बुलेट प्रुफ सिसाभित्र छ, घर्तीले हा’तले प्र’हार ग’र्दा बुलेट प्रुफ बाहिर रहेको सिसाको आवरण भने फुटेको छ । त्यसपछि उनले कोठाभित्र सोकेसमा राखिएको ‘खुकुरी झि’केर श्रीपेच निकाल्न प्रयास गरेको देखिन्छ । टिकट काटेर संग्रहालय अवलोकनका लागि पुगेका घर्तीले सोकेस फु’टाएर श्रीपेच निकाल्न खोजेपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० अशोक सिंहले जानकारी दिए । घर्तीलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गमा राखी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।
प्रेम पछि बिवाह गर्न हतार! बिहे हुने वित्तिकै डिभोर्सको चाहना ? यस्तो छ कारण
युवा युवती बिच प्रेम हुनु र बिवाह हुनु सामान्य कुरा हो तर भारतमा एक प्रेम